What Happen in Myanmar - CRPH
Category: What Happen in Myanmar
Protests against Military Coup What Happen in Myanmar
50th Day of Myanmar protest
Today, March 23, marks the 50th day since the February 1 coup d’état in Myanmar. Since seizing power, the junta…
CDM Declaration (In Myanmar) Declaration (ကြေညာချက်) What Happen in Myanmar What We Do
အကြမ်းမဖက် ပြည်သူ့အာဏာဖီဆန်မှု နှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနအမိန့်ကြေညာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၁)၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၉ ရက်(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက်) အကြမ်းမဖက် ပြည်သူ့အာဏာဖီဆန်မှု နှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာခြင်း ၁။ လက်ရှိအချိန်တွင် တိုင်းပြည်အာဏာကို လူတစ်စုက လက်နက်အားကိုးဖြင့်…
CDM Declaration (In Myanmar) Declaration (ကြေညာချက်) What We Do
ထိရောက်စွာ အပြစ်ပေးအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအမိန့်ကြေညာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၁)၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၉ ရက်(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက်) ထိရောက်စွာ အပြစ်ပေးအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း ၁။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ဝန်ထမ်းများကို အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု…
Crackdown by Military Junta What Happen in Myanmar
Myanmar Military Coup: ‘Killing Spree’ Condemned by Human Rights Groups
‘Myanmar Military Coup: ‘Killing Spree’ Condemned by Human Rights Groups’ The known death toll in Myanmar’s military junta has risen…
What’s happening in Myanmar? The coup, protests and history | ABC News
The military ruled Myanmar for decades until they decided to take tentative steps towards democracy. Now, they’ve seized control from…
Dear UN, Help Myanmar Save Humanity
Myanmar Police Crackdown near Yuzana Plaza, Yangon March 2, 2021
Myanmar Military shooting into mosque at Mandalay – March 1, 2021
Monywa Gazette CEO is arrested by Myanmar Police, Feb 27 2021
မုံရွာမြို့ဗိုလ်ချုပ်လမ်းဘေးရှိ ဆန္ဒပြလူထုရှိရာ ပြသာဒ်ကျောင်း (ဆင်ဖြူ ရာမကျောင်း)အနီးအခြေအနေအား မုံရွာဂေဇက် ဖေ့စ်ဘွခ်တွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေစဉ် အရပ်ဝတ်လူသုံးဦးမှ လာရောက်ပြီး ဖုန်းအားရိုက်ခွဲ၍ ကန်ကျောက် ရိုက်နှက်ကာ ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးကျော်ကျော်ဝင်းအား ဖမ်းဆီး၍ အချုပ်ကားပေါ်တင်စဉ် ဒဏ်ရာများရရှိထားပြီး ဆေးကုသပေးမှု…